Walaaca | Caafimaadka Maskaxda Texas | Xaaladaha Caafimaadka Maskaxda ee Guud
Calaamadaha iyo Calaamadaha
In ka badan 40 milyan oo qof oo qaangaar ah oo Mareykan ah ayaa qaba xanuunka welwelka, taas oo ka dhigaysa nooca caafimaadka maskaxda noocaan ah midka ugu badan kuwa ka weyn 18 1 . Dhibaatooyinka walwalka badanaa waxay bilaabmaan inta lagu jiro carruurnimada dambe ama qaangaarnimada hore, laakiin waxay bilaabi karaan da ‘kasta.
Nasiib darro, in ka badan 60% dadka la halgamaya xanuunnada welwelka ma helaan daaweyn 1 . Tani waa masiibo dhab ah maxaa yeelay xaaladahaan waa kuwo aad loo daaweyn karo. Waxaan rajeyneynaa in kordhinta waxbarashada ku saabsan welwelka iyo daaweynta badan ee la heli karo ay keeni doonto in dad badan ay helaan gargaarka ay u baahan yihiin.
Cabsida iyo walwalka, duruufaha gaarka ah, ma ahan wax laga walwalo. Baqdintu waxay kicisaa jawaabteena dabiiciga ah “duul, dagaal, ama qabow”, taas oo noo diyaarineysa inaan ka cararno ama joogno oo aan la dagaallano khatar weyn. Cabsida iyo walwalka waa jawaabaha la qabsiga ee lagama maarmaanka u ah badbaadada.
In ka badan 60 %
dadka la dhibtoonaya xanuunka welwelka ma helaan daaweyn 1 .
Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood, dadku waxay leeyihiin jawaabo cabsi iyo walaac ah oo kiciya iyadoon wax hanjabaad ah lahayn, ama waxay u arki karaan hanjabaad inay ka khatar badan tahay sida dhabta ah. Dadka la halgamaya xaaladaha walwalka, cabsidooda iyo walwalkooda waxay hor istaagaan awooddooda ay ku shaqeynayaan waxayna wax u dhimaysaa awooddooda ay ku raaxeystaan nolosha. Nasiib wanaagse, waxaa jira taageero badan iyo xulashooyin daaweyn oo badan oo loo heli karo maareynta welwelka.
Calaamadaha Guud iyo Calaamadaha Walaaca
Argagax ama cabsi
Dareemis cabsi, degganaan la’aan, ama kacsanaan
Neefsasho deg deg ah
Kordhinta garaaca wadnaha
Qabow, kabuubyo, ama xoqid gacmaha iyo / ama cagaha
Dhibaato kaa haysata xakamaynta walwalka ama ka fekerida waxyaabo aan walwalka ahayn
Leedahay rabitaan ah inaad ka fogaato waxyaabaha kiciya welwelka
Ilaha dheeraadka ah
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan welwelka iyo noocyada kala duwan ee daaweynta ee la heli karo, booqo:
Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda (NIMH) bogga Xanuunada walwalka.
Ururka Walaaca iyo Murugada ee Ameerika (ADAA) macluumaad guud oo ku saabsan xanuunka welwelka.
Ururka Walaaca iyo Murugada ee Ameerika (ADAA) talooyin ku saabsan xeeladaha la -tacaalidda cudurrada walaaca.
Dugsiga Caafimaadka Stanford khayraadka loogu talagalay waalidiinta carruurta leh xanuunka welwelka.
Everydayhealth.com liiska ilaha cudurada walaaca.
Barashada Caafimaadka Habdhaqanka moduleka tababarka onlaynka ah ee Dhibaatooyinka Walaaca .
Haddii ay kugu adkaato helitaanka daryeel ama haddii aad dhibaato ka qabto qorshahaaga caafimaadka, Waaxda Caymiska Texas iyo kan Xafiiska Ombudsman -ka ee Guddiga Caafimaadka iyo Adeegyada Dadweynaha Texas waxaa laga yaabaa inay ku caawiso. Waxay kaloo kaa caawin karaan inaad wax badan ka ogaato xuquuqdaada.
Ururka Walaaca iyo Murugada ee Ameerika: Xaqiiqooyin iyo Tirokoob.
Wax badan ka baro Walaaca iyo xaaladaha kale ee caafimaadka dabeecadda ee xarunteena eLearning. Koorsooyinka deg -degga ah, ee xog -ogaalka ah waxaa loogu talagalay inay kugu qalabeeyaan aqoonta, agabka, iyo rajada mustaqbalka – naftaada ama qof kale oo aad danaynayso.
Booqo eLearning Hub